आज कुकुर तिहार सँगै लक्ष्मी पुजा, यो समय छ उत्तम! - ParyatanBazar.com
आज कुकुर तिहार सँगै लक्ष्मी पुजा, यो समय छ उत्तम!
पर्यटन बजार२९ कार्तिक २०७७, शनिबार मा प्रकाशित
कात्तिक २९, काठमाडौं।आज लक्ष्मि पूजा अर्थात धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरेर मनाइँदै छ । घर फोहोर भयो भने लक्ष्मीले बास नगर्ने भएकोले आज घर आँगन, कोठा,सफा र उज्यालो राखेर लक्ष्मीको पूजा गर्ने प्रचलन छ । आजको दिन राति अबेर सम्म धनधान्यकी देवि लक्ष्मीको पूजा अर्चना गरीन्छ ।
यसपालि नरक चतुर्दशी ,कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेको छ । साथै शनिबार दिउँसो १ः४९ बजेसम्म चतुर्दशी र यसपछि आइतबार बिहान ११ः२७ बजेसम्म औँसी रहेको छ । चतुर्दशीमा कुकुर पूजा र औँसी लागेपछि लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्ने यसका जानकारहरुले बताएका छन ।
आज लक्ष्मी पूजा गर्दा गोधुली स्थिर लग्न वृष र सूर्यस्तको विचमा ५ :१२ बाट ७: ०८ सम्मको समय उत्तम रहेको छ भने सिंह लग्नको शुभ समय राति ११: ४३ देखि १: ५५ को समय उत्तम छ । आजको दिन बिहानैबाट गाईलाइ पूजाआजा गरेर लक्ष्मीका अवतार गौ माताको सेवा गरीन्छ ।
आज कुकुरलाई पुजिने दिन आजको दिन कुकुरलाई पूजा गरी खान दिनाले मानिसहरुलाई पूण्य प्राप्त हुने जनविश्वास छ । हिन्दु परम्परा अनुसार कुकुरलाई अभिभावक, सुरक्षाकर्मी अनि यमराजको दूतका रुपमा मानिन्छ र मृत्युपर्यन्त पनि मोक्षको द्वारमा कुकुरले नै पहरा दिएको कथन रहिआएको छ ।
नरक चतुर्दशीका दिन बिहानै उठेर तीर्थमा स्नान गर्नाले यस लोकमा सुख शान्ति मिल्नुका साथै नरक जानु नपर्ने जनविश्वास रहेको छ ।